WT အမိန့်ကြော်ငြာစာ ၄၇/၂၀၁၈ vs မူလ ၅၁/၂၀၁၇ WT အမိနျ့ကွျောငွာစာ ၄၇/၂၀၁၈ vs မူလ ၅၁/၂၀၁၇ - Business Centric Network (BCN)
WT အမိန့်ကြော်ငြာစာ ၄၇/၂၀၁၈ vs မူလ ၅၁/၂၀၁၇ WT အမိနျ့ကွျောငွာစာ ၄၇/၂၀၁၈ vs မူလ ၅၁/၂၀၁၇
June 25, 2018 June 25, 2018 San Thida
WT အမိန့်ကြော်ငြာစာ ၄၇/၂၀၁၈ ထွက်ရှိလာတော့ မူလ ၅၁/၂၀၁၇ နဲ့ မတူ ပြောင်းလဲသွားတာတွေလေ့လာကြည့် ကြရအောင်။
အတိုးပေးငွေနဲ့ လိုင်စင်၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၊ မူပိုင်အခွင့်အရေး တို့မပြောင်းလဲပါ။
နိုင်ငံတော်အတွင်း ပေးချေငွေ ဖော်ပြချက် ၂စုခွဲလိုက်ပါတယ်။
၅၁/၂၀၁၇ မှ ပေးချေငွေအမျိုးအစားများကို နိုင်ငံတော်အဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းများ၊ စည်ပင်သာယာအဖွဲ့များ၊ နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများ၊ နိုင်ငံခြားသားပိုင်လုပ်ငန်းများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီများ၊ အစုစပ်လုပ်ငန်းများ လို့ဖော်ပြချက်အစား
၄၇/၂၀၁၈ မှာ ပြည်ထောင်စုအဆင့်အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများ၊ နေပြည်တော်ကောင်စီ၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့များ၊နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းများ၊ စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များ လို့ ပြင်ဆင်ခြင်းကြောင့် ပေးချေငွေအမျိုးအစား ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ နှုန်းထားကတော့ ပြည်တွင်း ၂% နဲ့ ပြည်ပ ၂.၅% ဖြစ်လို့ ၅၁/၂၀၁၇ အတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
၅၁/၂၀၁၇မှာ ပေးချေမှုကို တင်ဒါစနစ်၊ ကန်ထရိုက်စနစ်၊ ဈေးနှုန်းခေါ်ယူသည့်စနစ် သို့မဟုတ် အခြားစနစ်တစ်ခုခုဖြင့် လို့ဖော်ပြချက်ကို
၄၇/၂၀၁၈ မှာတင်ဒါစနစ် (သို့) လေလံစနစ် (သို့) ဈေးပြိုင်ခေါ်ယူသည့်စနစ် (သို့) ကန်ထရိုက်စာချုပ် (သို့) သဘောတူစာချုပ် (သို့) အခြားစနစ်တစ်ခုခုဖြင့် လို့ ဖြည့်စွက်ခြင်းကြောင့် စနစ် ဖေိာပြချက်များတိုးလာပေမယ့် အခြားစနစ်တစ်ခုခုဖြင့် လို့ ဖော်ပြချက်ပါရှိမြဲဖြစ်လို့ တိုက်ရိုက်ငွေသားပေးချေဝယ်ယူတဲ့စနစ်မှ အပ စာချုပ်စာတမ်း အမှာစာ စသည်တို့နဲ့ ပေးချေတဲ့စနစ်တစ်မျိုးမျိုး ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်တော့ မပြောင်းလဲဘူးလို့ ထင်မြင်ပါတယ်။
၅၁/၂၀၁၇ မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ ပေးချေငွေအမျိုးအစားများကို နိုင်ငံတော်အဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းများ၊ စည်ပင်သာယာအဖွဲ့များ၊ နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများ၊ နိုင်ငံခြားသားပိုင်လုပ်ငန်းများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီများ၊ အစုစပ်လုပ်ငန်းများ ကို ပြည်တွင်းနေ ၂% ပြည်ပနေနိုင်ငံခြားသား ၂.၅% လို့ဖော်ပြချက်များကို
၄၇/၂၀၁၈ မှာ နိုင်ငံတော်နှင့်အကျိုးတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ အစုစပ်လုပ်ငန်း၊ ဖက်စပ်လုပ်ငန်း၊ ကုမ္ပဏီ၊ တစ်ဦးချင်းပုဂ္ဂိုလ်တို့ စုပေါင်းထားသည့်အဖွဲ့အစည်း၊ တည်ဆဲဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရ မှတ်ပုံတင်၍ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် အသင်းအဖွဲ့၊ သမဝါယမအသင်းနှင့် နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများ နိုင်ငံခြားသားပိုင် လုပ်ငန်းများက လို့ ခွဲထုတ်ပြီး ပြည်တွင်း မနုတ်ယူ ပြည်ပ ၂.၅% လို့ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ခြင်းကြောင့် အရင်က ပြည်တွင်းပေးချေငွေကို နုတ်ယူပေမယ့် အခုတော့ ပြည်တွင်းနေများထံပေးချေငွေဆိုရင် ဖြတ်တောက်ရန်မလိုတော့ဘဲ ပြည်ပသို့ပေးချေငွေကိုသာ နုတ်ယူပေးဆောင်ရန် လို့ နားလည်မိပါတယ်။
၅၁/၂၀၁၇မှာ တင်ဒါစနစ်၊ ကန်ထရိုက်စနစ်၊ ဈေးနှုန်းခေါ်ယူသည့်စနစ်၊ အခြားစနစ်တစ်ခုခုဖြင့် နိုင်ငံတော်အတွင်း ပစ္စည်းဝယ်ယူခြင်း၊ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပေးစေခြင်း၊ ဝန်ဆောင်မှုရယူခြင်း၊ ငှားယူခြင်း တို့အတွက်ပေးချေငွေများ လို့ဖော်ပြချက်ကို
၄၇/၂၀၁၈မှာ ကန်ထရိုက်စာချုပ်၊ သဘောတူစာချုပ်၊ အခြားစနစ်တစ်ခုခုဖြင့် နိုင်ငံတော်အတွင်း ပစ္စည်းဝယ်ယူခြင်း၊ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပေးစေခြင်း၊ ဝန်ဆောင်မှုဆောင်ရွက်ပေးစေခြင်း တို့အတွက်ပေးချေငွေများ လို့ ပြောင်းလဲဖြည့်စွက်တဲ့အတွက် ငှားယူခြင်းမပါဝင်တော့ဘူးလို့ တွေ့ရှိရပါတယ်။
အပိုဒ် ၂ ကတော့ မပြောင်းလဲပါ။ ပေးချေငွေကို လက်ခံရရှိသူအမည် သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းအမည်နဲ့ သွင်းရန်ဖြစ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာအခွန်ရုံး၏ ဘဏ်စာရင်းသို့ ပေးသွင်းရမည် ဖြစ်ပါတယ်။
သက်ဆိုင်ရာအခွန်ရုံး၏ ဘဏ်စာရင်းဆိုတာ ပေးချေငွေကိုနုတ်ယူပေးသွင်းသူနဲ့သက်ဆိုင်ရာအခွန်ရုံး၏ဘဏ်စာရင်းလား ?
နုတ်ယူပေးသွင်းသူနဲ့ဆိုင်ရာဘဏ်စာရင်းကို ဆိုတဲ့ ပထမ အချက်က ပိုသင့်တော်မယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ မြဝတီကလုပ်ငန်းရှင်က ရန်ကုန်က ကုမ္ပဏီကို ငွေပေးချေရန်ရှိပြီး WT ကို ရန်ကုန်လာသွင်းရမယ် ဆိုတာက သဘာဝမကျပါ။ မြဝတီကနေငွေပေးချေတာမို့ သူနဲ့လက်လှမ်းမီရာ မြဝတီအခွန်ရုံးသို့ပေးသွင်းမှသာ သဘာဝကျပါမယ်။ ငွေသွင်းချလန်မှာ လက်ခံရရှိသူအမည်/လုပ်ငန်းဖော်ပြထားပြီးဖြစ်လို့ တကယ်ငွေဝင်/မဝင်က ဌာနကသာ စိစစ်ရန်လို့ နားလည်ပါတယ်။ စိစစ်ရန်နည်းလမ်း (နုတ်ယူခံရသူသည် ပတခ-ဝင ၁၇ကို ချက်ချင်း အခွန်ရုံးသို့တင်ပြပေးရန်၊ အခွန်ရုံးများက ရုံးအချင်းချင်း စာဖြင့်မေးရန် ပြန်ကြားရန်၊ မလိုအပ်သော အခက်အခဲရှိနေသော အခွန်ထမ်းထံမှ ချလန်မိတ္တူတောင်းယူခြင်းမပြုရန် စသည်ဖြင့်) သတ်မှတ်ပေးမယ်လို့ ယူဆပါတယ်။
ဘာစနစ်မို့ ညာစနစ်မို့ ချလန်မိတ္တူတောင်းတာ၊ လက်ခံရရှိသူနဲ့ဆိုင်ရာအခွန်ရုံးကိုသွင်းရမယ်ဆိုတာတွေက သဘာဝ မကျ လက်တွေ့ဆောင်ရွက်ရန်ခက်ခဲပါတယ်လို့ ထင်မြင်ပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင်အယူအဆဖြစ်ပါတယ်။
အပိုဒ် ၃နဲ့ ၄ ကွဲလွဲချက်မရှိပါ။
၅၁/၂၀၁၇ အပိုဒ် ၅ မှာ SAS အခွန်ထမ်းနဲ့ OAS အခွန်ထမ်း ပေးချေငွေပမာဏ ခွဲခြားထားပါတယ်။
၄၇/၂၀၁၈ အပိုဒ် ၅ မှာ SAS နဲ့ OAS လို့ မခွဲခြားတော့ဘဲ တစ်နှစ်အတွင်း စုစုပေါင်း ပေးချေငွေ ၁၀သိန်း ကျော်ပါက နုတ်ယူပေးသွင်းရမည် လို့ဆိုတဲ့အတွက် ငွေပမာဏ တူသွားပြီဖြစ်ပါတယ်၊ ပေးချေမှုတစ်ရပ်ချင်း မဟုတ်တော့ဘဲ စုစုပေါင်းလို့ ဆိုတဲ့အတွက် ပေးချေငွေတွေကိုမှတ်သားထားပြီး စုစုပေါင်း ၁၀သိန်းကျော်ရင် နုတ်ယူရမယ့် အဓိပ္ပါယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျော်တဲ့ပမာဏအပေါ် တွက်ချက်ရမလား၊ မူလ ၁ကျပ်ကိုပါ အပါအဝင်ပြန်ထည့်တွက်ရမလား ဆိုတာကို ရှင်းလင်းချက်လိုမယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ ပြည်ပနေနိုင်ငံခြားသား ကိုပေးချေရင်တော့ ငွေပမာဏကန့်သတ်ချက်မရှိအားလုံးအပေါ်ကတွက်ရပါမယ်မို့ ၅၁နဲ့ ၄၇ တူပါတယ်။
၅၁/၂၀၁၇ အပိုဒ် ၅(ဂ) အရ နုတ်ယူငွေပမာဏမမီရင် သတင်းစာရင်းပေးပို့ရန် ဖော်ပြထားပေမယ့် ၄၇/၂၀၁၈ မှာတော့အဲသည်သတ်မှတ်ချက်မရှိတော့တဲ့အတွက် အခွန်ထမ်းလိုက်နာရန်တာဝန် မရှိတော့တာ သတိပြုမိပါတယ်။
အပိုဒ် ၆ ဖော်ပြချက်များ ပြင်ဆင်မှုအနည်းငယ်ရှိပြီး အစိုးရအဖွဲ့နဲ့ နိုင်ငံပိုင်များအချင်းချင်း ပေးချေမှုဆိုရင် နုတ်ပယ်ရန်မလိုတာတူညီပါတယ်၊ ၄၇/၂၀၁၈ အရ စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့ ထပ်တိုးလာတာတွေ့ရှိရပါတယ်။ဒါကြောင့် အစိုးရ၊ နိုင်ငံပိုင်နဲ့ စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များအချင်းချင်း ပေးချေမှုနုတ်ပယ်ရန်မလိုတော့ ပါလို့ ယူဆရပါတယ်။
ငွေလက်ခံသူက ငြင်းဆိုခြင်းကြောင့် နုတ်ယူပေးသွင်းရမည့်တာဝန်မှ ကင်းလွတ်ခွင့်မရှိစေရလို့ အပိုဒ် ၆ မှာ ဆိုထားပေမယ့် မနုတ်ယူရင်၊ နုတ်ယူထားပြီး အချိန်မီမသွင်းပေးရင် ပြစ်ဒဏ်ပေးဖို့ ကျန်နေပါသေးတယ်။
ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၆(ဃ) အရ သတ်မှတ်မယ့် ဒဏ်ငွေနဲ့ ဘယ်လိုပေးဆောင်စေရမယ်ဆိုတာရယ်၊ နုတ်ယူခြင်းခံရမယ့်သူက သဘောတူ နုတ်ယူခြင်းခံထားတာကို မပေးသွင်းရင် နုတ်ယူခံသူအပေါ် ပုဒ်မ ၁၆-(ဂ) အရ ဒဏ်ရိုက်ခြင်းသည် မပျက်ကွက်သူကို ဒဏ်တပ်ရိုက်သလိုဖြစ်နေတာရယ် တွေ့ရပါတယ်။ နောက်ဆက်လာမယ့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေမှာ အဲသည်လိုအပ်ချက်အတွက် အစီအစဉ်ပါလာမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
၅၁/၂၀၁၇ အပိုဒ် ၇ အရ ညွှန်ချုပ်သည် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ဖွင့်ဆိုချက်၊ ပုံစံ သတ်မှတ်တာ၊ WT မနုတ်ဖို့ အကြောင်းကြားတာ၊ တာဝန်လွှဲပေးတာ၊ တွေကို ဝန်ကြီးဌာနတင်ပြရန် မလိုအပ်ဘဲ ဆောင်ရွက်နိုင်ပေမယ့်
၄၇/၂၀၁၈ အပိုဒ် ၇ အရတော့ WT နုတ်ရန်မလိုတဲ့ပေးချေငွေသတ်မှတ်တာ၊ နုတ်ယူရမယ့် ရာခိုင်နှုန်းပြင်ဆင်တာ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ဖွင့်ဆိုချက်၊ ပုံစံ၊ နုတ်ယူရန်နည်းလမ်း သတ်မှတ်တာ၊ တာဝန်လွှဲပေးတာတွေကို စီမံမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီးဌာနသဘောတူညီချက်နဲ့ သာ ညွှန်ချုပ်က ဆောင်ရွက်ရမယ်လို့ ပြောင်းလဲသွားတာကို လေ့လာမိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ၇(ခ) နှုန်းထားကို ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ပေးခွင့် ပိုမိုလာပါတယ်။ ဘယ်လို တင်ပြလျောက်ထားရမယ်ဆိုတဲ့ နည်းလမ်း ထွက်လာမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
WT အမိနျ့ကွျောငွာစာ ၄၇/၂၀၁၈ ထှကျရှိလာတော့ မူလ ၅၁/၂၀၁၇ နဲ့ မတူ ပွောငျးလဲသှားတာတှလေလေ့ာကွညျ့ ကွရအောငျ။
အတိုးပေးငှနေဲ့ လိုငျစငျ၊ ကုနျအမှတျတံဆိပျ၊ မူပိုငျအခှငျ့အရေး တို့မပွောငျးလဲပါ။
နိုငျငံတျောအတှငျး ပေးခငြှေေ ဖျောပွခကျြ ၂စုခှဲလိုကျပါတယျ။
၅၁/၂၀၁၇ မှ ပေးခငြှေအေမြိုးအစားမြားကို နိုငျငံတျောအဖှဲ့အစညျးမြား၊ နိုငျငံပိုငျလုပျငနျးမြား၊ စညျပငျသာယာအဖှဲ့မြား၊ နိုငျငံခွားကုမ်ပဏီမြား၊ နိုငျငံခွားသားပိုငျလုပျငနျးမြားနှငျ့ အဖှဲ့အစညျးမြား၊ ပွညျတှငျးကုမ်ပဏီမြား၊ အစုစပျလုပျငနျးမြား လို့ဖျောပွခကျြအစား
၄၇/၂၀၁၈ မှာ ပွညျထောငျစုအဆငျ့အဖှဲ့အစညျးမြား၊ ပွညျထောငျစုဝနျကွီးဌာနမြား၊ နပွေညျတျောကောငျစီ၊ တိုငျးဒသေကွီး/ပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့မြား၊နိုငျငံပိုငျလုပျငနျးမြား၊ စညျပငျသာယာရေးအဖှဲ့မြား လို့ ပွငျဆငျခွငျးကွောငျ့ ပေးခငြှေအေမြိုးအစား ပွောငျးလဲသှားပါတယျ။ နှုနျးထားကတော့ ပွညျတှငျး ၂% နဲ့ ပွညျပ ၂.၅% ဖွဈလို့ ၅၁/၂၀၁၇ အတိုငျးဖွဈပါတယျ။
၅၁/၂၀၁၇မှာ ပေးခမြှေုကို တငျဒါစနဈ၊ ကနျထရိုကျစနဈ၊ ဈေးနှုနျးချေါယူသညျ့စနဈ သို့မဟုတျ အခွားစနဈတဈခုခုဖွငျ့ လို့ဖျောပွခကျြကို
၄၇/၂၀၁၈ မှာတငျဒါစနဈ (သို့) လလေံစနဈ (သို့) ဈေးပွိုငျချေါယူသညျ့စနဈ (သို့) ကနျထရိုကျစာခြုပျ (သို့) သဘောတူစာခြုပျ (သို့) အခွားစနဈတဈခုခုဖွငျ့ လို့ ဖွညျ့စှကျခွငျးကွောငျ့ စနဈ ဖေိာပွခကျြမြားတိုးလာပမေယျ့ အခွားစနဈတဈခုခုဖွငျ့ လို့ ဖျောပွခကျြပါရှိမွဲဖွဈလို့ တိုကျရိုကျငှသေားပေးခဝြေယျယူတဲ့စနဈမှ အပ စာခြုပျစာတမျး အမှာစာ စသညျတို့နဲ့ ပေးခတြေဲ့စနဈတဈမြိုးမြိုး ဆိုတဲ့ အဓိပ်ပါယျတော့ မပွောငျးလဲဘူးလို့ ထငျမွငျပါတယျ။
၅၁/၂၀၁၇ မှာ ဖျောပွခဲ့တဲ့ ပေးခငြှေအေမြိုးအစားမြားကို နိုငျငံတျောအဖှဲ့အစညျးမြား၊ နိုငျငံပိုငျလုပျငနျးမြား၊ စညျပငျသာယာအဖှဲ့မြား၊ နိုငျငံခွားကုမ်ပဏီမြား၊ နိုငျငံခွားသားပိုငျလုပျငနျးမြားနှငျ့ အဖှဲ့အစညျးမြား၊ ပွညျတှငျးကုမ်ပဏီမြား၊ အစုစပျလုပျငနျးမြား ကို ပွညျတှငျးနေ ၂% ပွညျပနနေိုငျငံခွားသား ၂.၅% လို့ဖျောပွခကျြမြားကို
၄၇/၂၀၁၈ မှာ နိုငျငံတျောနှငျ့အကြိုးတူ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျသညျ့ စီးပှားရေးလုပျငနျးမြား၊ အစုစပျလုပျငနျး၊ ဖကျစပျလုပျငနျး၊ ကုမ်ပဏီ၊ တဈဦးခငျြးပုဂ်ဂိုလျတို့ စုပေါငျးထားသညျ့အဖှဲ့အစညျး၊ တညျဆဲဥပဒတေဈရပျရပျအရ မှတျပုံတငျ၍ဖှဲ့စညျးထားသညျ့ အဖှဲ့အစညျး သို့မဟုတျ အသငျးအဖှဲ့၊ သမဝါယမအသငျးနှငျ့ နိုငျငံခွားကုမ်ပဏီမြား နိုငျငံခွားသားပိုငျ လုပျငနျးမြားက လို့ ခှဲထုတျပွီး ပွညျတှငျး မနုတျယူ ပွညျပ ၂.၅% လို့ပွငျဆငျဖွညျ့စှကျခွငျးကွောငျ့ အရငျက ပွညျတှငျးပေးခငြှေကေို နုတျယူပမေယျ့ အခုတော့ ပွညျတှငျးနမြေားထံပေးခငြှေဆေိုရငျ ဖွတျတောကျရနျမလိုတော့ဘဲ ပွညျပသို့ပေးခငြှေကေိုသာ နုတျယူပေးဆောငျရနျ လို့ နားလညျမိပါတယျ။
၅၁/၂၀၁၇မှာ တငျဒါစနဈ၊ ကနျထရိုကျစနဈ၊ ဈေးနှုနျးချေါယူသညျ့စနဈ၊ အခွားစနဈတဈခုခုဖွငျ့ နိုငျငံတျောအတှငျး ပစ်စညျးဝယျယူခွငျး၊ လုပျငနျးဆောငျရှကျပေးစခွေငျး၊ ဝနျဆောငျမှုရယူခွငျး၊ ငှားယူခွငျး တို့အတှကျပေးခငြှေမြေား လို့ဖျောပွခကျြကို
၄၇/၂၀၁၈မှာ ကနျထရိုကျစာခြုပျ၊ သဘောတူစာခြုပျ၊ အခွားစနဈတဈခုခုဖွငျ့ နိုငျငံတျောအတှငျး ပစ်စညျးဝယျယူခွငျး၊ လုပျငနျးဆောငျရှကျပေးစခွေငျး၊ ဝနျဆောငျမှုဆောငျရှကျပေးစခွေငျး တို့အတှကျပေးခငြှေမြေား လို့ ပွောငျးလဲဖွညျ့စှကျတဲ့အတှကျ ငှားယူခွငျးမပါဝငျတော့ဘူးလို့ တှရှေိ့ရပါတယျ။
အပိုဒျ ၂ ကတော့ မပွောငျးလဲပါ။ ပေးခငြှေကေို လကျခံရရှိသူအမညျ သို့မဟုတျ လုပျငနျးအမညျနဲ့ သှငျးရနျဖွဈပွီး သကျဆိုငျရာအခှနျရုံး၏ ဘဏျစာရငျးသို့ ပေးသှငျးရမညျ ဖွဈပါတယျ။
သကျဆိုငျရာအခှနျရုံး၏ ဘဏျစာရငျးဆိုတာ ပေးခငြှေကေိုနုတျယူပေးသှငျးသူနဲ့သကျဆိုငျရာအခှနျရုံး၏ဘဏျစာရငျးလား ?
နုတျယူပေးသှငျးသူနဲ့ဆိုငျရာဘဏျစာရငျးကို ဆိုတဲ့ ပထမ အခကျြက ပိုသငျ့တျောမယျလို့ ယူဆပါတယျ။ မွဝတီကလုပျငနျးရှငျက ရနျကုနျက ကုမ်ပဏီကို ငှပေေးခရြေနျရှိပွီး WT ကို ရနျကုနျလာသှငျးရမယျ ဆိုတာက သဘာဝမကပြါ။ မွဝတီကနငှေပေေးခတြောမို့ သူနဲ့လကျလှမျးမီရာ မွဝတီအခှနျရုံးသို့ပေးသှငျးမှသာ သဘာဝကပြါမယျ။ ငှသှေငျးခလြနျမှာ လကျခံရရှိသူအမညျ/လုပျငနျးဖျောပွထားပွီးဖွဈလို့ တကယျငှဝေငျ/မဝငျက ဌာနကသာ စိစဈရနျလို့ နားလညျပါတယျ။ စိစဈရနျနညျးလမျး (နုတျယူခံရသူသညျ ပတခ-ဝင ၁၇ကို ခကျြခငျြး အခှနျရုံးသို့တငျပွပေးရနျ၊ အခှနျရုံးမြားက ရုံးအခငျြးခငျြး စာဖွငျ့မေးရနျ ပွနျကွားရနျ၊ မလိုအပျသော အခကျအခဲရှိနသေော အခှနျထမျးထံမှ ခလြနျမိတ်တူတောငျးယူခွငျးမပွုရနျ စသညျဖွငျ့) သတျမှတျပေးမယျလို့ ယူဆပါတယျ။
ဘာစနဈမို့ ညာစနဈမို့ ခလြနျမိတ်တူတောငျးတာ၊ လကျခံရရှိသူနဲ့ဆိုငျရာအခှနျရုံးကိုသှငျးရမယျဆိုတာတှကေ သဘာဝ မကြ လကျတှဆေ့ောငျရှကျရနျခကျခဲပါတယျလို့ ထငျမွငျပါတယျ။ ကိုယျပိုငျအယူအဆဖွဈပါတယျ။
အပိုဒျ ၃နဲ့ ၄ ကှဲလှဲခကျြမရှိပါ။
၅၁/၂၀၁၇ အပိုဒျ ၅ မှာ SAS အခှနျထမျးနဲ့ OAS အခှနျထမျး ပေးခငြှေပေမာဏ ခှဲခွားထားပါတယျ။
၄၇/၂၀၁၈ အပိုဒျ ၅ မှာ SAS နဲ့ OAS လို့ မခှဲခွားတော့ဘဲ တဈနှဈအတှငျး စုစုပေါငျး ပေးခငြှေေ ၁၀သိနျး ကြျောပါက နုတျယူပေးသှငျးရမညျ လို့ဆိုတဲ့အတှကျ ငှပေမာဏ တူသှားပွီဖွဈပါတယျ၊ ပေးခမြှေုတဈရပျခငျြး မဟုတျတော့ဘဲ စုစုပေါငျးလို့ ဆိုတဲ့အတှကျ ပေးခငြှေတှေကေိုမှတျသားထားပွီး စုစုပေါငျး ၁၀သိနျးကြျောရငျ နုတျယူရမယျ့ အဓိပ်ပါယျဖွဈပါတယျ။ ကြျောတဲ့ပမာဏအပျေါ တှကျခကျြရမလား၊ မူလ ၁ကပျြကိုပါ အပါအဝငျပွနျထညျ့တှကျရမလား ဆိုတာကို ရှငျးလငျးခကျြလိုမယျလို့ ယူဆပါတယျ။ ပွညျပနနေိုငျငံခွားသား ကိုပေးခရြေငျတော့ ငှပေမာဏကနျ့သတျခကျြမရှိအားလုံးအပျေါကတှကျရပါမယျမို့ ၅၁နဲ့ ၄၇ တူပါတယျ။
၅၁/၂၀၁၇ အပိုဒျ ၅(ဂ) အရ နုတျယူငှပေမာဏမမီရငျ သတငျးစာရငျးပေးပို့ရနျ ဖျောပွထားပမေယျ့ ၄၇/၂၀၁၈ မှာတော့အဲသညျသတျမှတျခကျြမရှိတော့တဲ့အတှကျ အခှနျထမျးလိုကျနာရနျတာဝနျ မရှိတော့တာ သတိပွုမိပါတယျ။
အပိုဒျ ၆ ဖျောပွခကျြမြား ပွငျဆငျမှုအနညျးငယျရှိပွီး အစိုးရအဖှဲ့နဲ့ နိုငျငံပိုငျမြားအခငျြးခငျြး ပေးခမြှေုဆိုရငျ နုတျပယျရနျမလိုတာတူညီပါတယျ၊ ၄၇/၂၀၁၈ အရ စညျပငျသာယာရေးအဖှဲ့ ထပျတိုးလာတာတှရှေိ့ရပါတယျ။ဒါကွောငျ့ အစိုးရ၊ နိုငျငံပိုငျနဲ့ စညျပငျသာယာရေးအဖှဲ့မြားအခငျြးခငျြး ပေးခမြှေုနုတျပယျရနျမလိုတော့ ပါလို့ ယူဆရပါတယျ။
ငှလေကျခံသူက ငွငျးဆိုခွငျးကွောငျ့ နုတျယူပေးသှငျးရမညျ့တာဝနျမှ ကငျးလှတျခှငျ့မရှိစရေလို့ အပိုဒျ ၆ မှာ ဆိုထားပမေယျ့ မနုတျယူရငျ၊ နုတျယူထားပွီး အခြိနျမီမသှငျးပေးရငျ ပွဈဒဏျပေးဖို့ ကနျြနပေါသေးတယျ။
ဝငျငှခှေနျဥပဒပေုဒျမ ၁၆(ဃ) အရ သတျမှတျမယျ့ ဒဏျငှနေဲ့ ဘယျလိုပေးဆောငျစရေမယျဆိုတာရယျ၊ နုတျယူခွငျးခံရမယျ့သူက သဘောတူ နုတျယူခွငျးခံထားတာကို မပေးသှငျးရငျ နုတျယူခံသူအပျေါ ပုဒျမ ၁၆-(ဂ) အရ ဒဏျရိုကျခွငျးသညျ မပကျြကှကျသူကို ဒဏျတပျရိုကျသလိုဖွဈနတောရယျ တှရေ့ပါတယျ။ နောကျဆကျလာမယျ့ လုပျထုံးလုပျနညျးတှမှော အဲသညျလိုအပျခကျြအတှကျ အစီအစဉျပါလာမယျလို့ မြှျောလငျ့ပါတယျ။
၅၁/၂၀၁၇ အပိုဒျ ၇ အရ ညှနျခြုပျသညျ လုပျထုံးလုပျနညျး၊ဖှငျ့ဆိုခကျြ၊ ပုံစံ သတျမှတျတာ၊ WT မနုတျဖို့ အကွောငျးကွားတာ၊ တာဝနျလှဲပေးတာ၊ တှကေို ဝနျကွီးဌာနတငျပွရနျ မလိုအပျဘဲ ဆောငျရှကျနိုငျပမေယျ့
၄၇/၂၀၁၈ အပိုဒျ ၇ အရတော့ WT နုတျရနျမလိုတဲ့ပေးခငြှေသေတျမှတျတာ၊ နုတျယူရမယျ့ ရာခိုငျနှုနျးပွငျဆငျတာ၊ လုပျထုံးလုပျနညျး၊ဖှငျ့ဆိုခကျြ၊ ပုံစံ၊ နုတျယူရနျနညျးလမျး သတျမှတျတာ၊ တာဝနျလှဲပေးတာတှကေို စီမံမံဘဏ်ဍာဝနျကွီးဌာနသဘောတူညီခကျြနဲ့ သာ ညှနျခြုပျက ဆောငျရှကျရမယျလို့ ပွောငျးလဲသှားတာကို လလေ့ာမိပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ ၇(ခ) နှုနျးထားကို ပွငျဆငျသတျမှတျပေးခှငျ့ ပိုမိုလာပါတယျ။ ဘယျလို တငျပွလြောကျထားရမယျဆိုတဲ့ နညျးလမျး ထှကျလာမယျလို့ မြှျောလငျ့ပါတယျ။
Credit: Tax of Myanmar Q & A
Next postပန်းအလှဆင်သင်တန်း ပနျးအလှဆငျသငျတနျး